फूड-ड्रग अन्तर्क्रिया: you फूडहरू तपाईंले औषधिसँग मिसिन गर्नु हुँदैन - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कम्पनी चेकआउट स्वास्थ्य कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण खेलहरु समाचार, कल्याण प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण औषधि बनाम मित्र
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> Foods खाद्य पदार्थ तपाईलाई औषधिसँग मिसिन गर्नु हुँदैन
यदि तपाईंले खाली पेटमा कहिल्यै गलत औषधी लिनुभएको छ भने, तपाईंलाई आफ्नो गोलीको बोतल बाहिर पढ्नुको महत्त्व थाहा छ। यो फार्मेसी को लागी कुनै अनौठो खाना को लागी केहि औषधीहरु लिन चेतावनी दिन्छ। तर के तपाईंलाई त्यो थाहा थियो? के तपाईं खाने पनि तपाईंको औषधि असर गर्न सक्छ?
Common साधारण फूड-ड्रग अन्तर्क्रिया
खाना र औषधि अन्तर्क्रियाले तपाइँको पर्चे कम कम प्रभावकारी बनाउन र खतरनाक साइड इफेक्ट पैदा गर्न सक्छ। यहाँ केहि सामान्य अपराधीहरू छन्।
१. अंगूरको रस
के तपाईं प्रिस्क्रिप्शन स्ट्याटिनमा हुनुहुन्छ, जस्तो? Lipitor वा Zocor ? त्यसोभए तपाईं अpe्गुरको जुस छोड्न सक्नुहुन्छ। फलबाट यौगिकहरू (भनिन्छ)furanocoumarins)वास्तवमा तपाईको आन्द्रामा एन्जाइमलाई औषधी भत्काउनबाट रोक्न सक्छ। यसले शरीरमा औषधीको उच्च एकाग्रता निम्त्याउन सक्छ र सम्भावित रूपमा विषाक्त प्रतिक्रियाको परिणाम दिन्छ।
पोटेशियम को लागी काम गर्न कति समय लाग्छ?
तर यदि तपाईं स्ट्याटिनमा हुनुहुन्न भने पनि, तपाईं अंगूर-औषधि अन्तरक्रियादेखि सावधान हुन सक्नुहुन्छ। के व्यक्तिले महसुस गर्दैनन् भन्ने हो कि यसले स्ट्याटिनहरू मात्र नभएर ठूलो संख्यामा ड्रगहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ, मोर्टन तावेल, एमडी, का लेखक भन्छन् स्वास्थ्य सल्लाहहरू, मिथ्या र युक्तिहरू: एक चिकित्सकको सल्लाह । वास्तवमा कुनै पनि औषधि लिने जो कोहीले अंगूरको रस पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नुपर्दछ। यसले ओभर-द-काउन्टर एन्टीहिस्टामाइन्स र जन्म नियन्त्रण समावेश गर्दछ।
सम्बन्धित: कसरी पूरकहरूले औषधीसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्दछन्
यदि तपाईं एन्टिबायोटिक कोर्समा हुनुहुन्छ भने, आफ्नो गिलास दूधको साथ धुनुहोस्। डेयरीले निश्चित एन्टिबायोटिकहरू पनि बनाउन सक्छ, सहित सिप्रोफ्लोक्सासिन , लेभोफ्लोक्सासिन , र doxycycline कम प्रभावकारी।
यदि तपाईंको पेटमा दुग्ध उत्पादनहरू छन् भने, ती औषधिहरू धेरै कम जैवउपलब्ध हुन्छन्, भन्छन् लेन होरोभित्ज , एमडी, न्यूयोर्क शहर मा लेनोक्स हिल अस्पताल मा एक इंटर्निस्ट।
मोनोमाइन अक्सिडेज इनहिबिटरहरू (MAOIs) मा पनि बलियो, उमेर पनी जस्तै Parmesan र क्याम्बर्ट मा काट्नु पर्छ। यी चीजहरूमा टायरमाइनको उच्च स्तर हुन्छ, एक एमिनो एसिड जसले तपाईंको रक्तचापलाई जाँच्न मद्दत गर्दछ। टायरमाइनको उच्च स्तर माइग्रेन टाउको दुखाइ र रक्तचाप स्पाइकको साथ सम्बन्धित छ।
डा। तावेल भन्छिन्, एमएओआईहरूले टायरमाइन भत्काउन जिम्मेवार इन्जाइमलाई रोक्दछ, जसले गर्दा यसले तपाईंको रक्तचाप बढाउन र बढाउन सक्छ, डा। तावेल भन्छन्।
An. केरा र अन्य पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ
को एक उच्च सांद्रता पोटासियम केले हामी सबैका लागि स्वस्थ बनाउँदछ। तर तपाई धेरै पोटासियमको साथ अन्त्य गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले एन्जियोटेन्सिन रूपान्तरण गर्ने एन्जाइम (ACE) इनहिबिटर लिईरहँदा केराको गुच्छा खान्नुहुन्छ भने, लिसिनोप्रिल वा क्याप्टोप्रिल । यी औषधीहरूले शरीरलाई बढी पोटाशियम कायम राख्न सक्छ जुन अन्यथा मिर्गौलाद्वारा बाहिर निकालिन्छ।
डा। तावेल भन्छिन्, पोटेशियम एक महान खनिज हो र हाम्रो आहारमा आवश्यक छ, तर केही परिस्थितिहरूमा यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ। पोटेशियमको अत्यधिक निर्माणले तपाईंको मुटुको तालको साथ महत्त्वपूर्ण समस्या निम्त्याउन सक्छ।
कसरी योजनाbकाम भयो भन्न
केरा पोटासियमको लागि सबैभन्दा परिचित खाना हो, जबकि तिनीहरू खनिजको एक प्रशस्तताबाट एक मात्र खानाबाट टाढा हुन्छन्। तपाईंको स्वीट आलु, मशरूम, आलु र अन्य उच्च-पोटेशियमयुक्त खाद्य पदार्थहरूको सेवन सीमित गर्नुहोस् जब ACE अवरोधकर्ताहरू लिनुहुन्छ। थप रूपमा, नुन विकल्प प्राय: सोडियमलाई पोटेशियम क्लोराइडले बदल्नुहोस्।
Black. कालो लाईकोरिस
कालो लाईकोरिस एक ध्रुवीकरण क्यान्डी हो। यदि तपाइँ यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले रातो Twizzlers मा स्विच गर्न आवश्यक पर्दछ यदि तपाइँको डाक्टरले तपाइँको लागि एक प्रिस्क्रिप्शन लेख्छ भने डिजोक्सिन , डा। तावेल सल्लाह दिन्छन्। कालो लाईकोरिसमा glycyrrhizin भनिने एक कम्पाउन्ड हुन्छ, जुन कारण हुन सक्छ डिजॉक्सिनबाट एक विषाक्त प्रभाव ।
र यदि तपाईले औषधि लिन छाड्नु भयो भने पनि तपाईले कालो लाईकोरिसलाई राम्रो मान्नु हुन्छ। एफडीए चेतावनी दिन्छ कि केवल दुई औंस कालो लाइसेरिस दुई हप्ताको लागि दिनले 40० बर्ष वा माथिकालाई अनियमित मुटुको धडकन दिन सक्छ, अस्पताल भर्ना आवश्यक छ।
Green. हरियो पातदार तरकारीहरु
तरकारीहरू जस्तै ब्रोकोली, गोभी, पालक, काली र ब्रुसेल्स स्प्राउट्स सबैमा भिटामिन के अधिक मात्रा हुन्छ। भिटामिन के रगत जम्मा गर्न मद्दत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जसले गर्दा अत्यधिक रक्तस्राव रोक्न सकिन्छ। यद्यपि यो वास्तवमा आम रगत पातलो भनिन्छ Coumadin (यसको सामान्य नामबाट पनि चिनिन्छ, warfarin )।
यदि तपाईंलाई वारफेरिन तोकिन्छ भने, तपाईंको डाक्टरले सिफारिश गर्नेछन् कि तपाईंले भिटामिन के उच्च खानाको मात्रामा गम्भीरतापूर्वक परिवर्तन गर्नुहुन्न। तपाईले सामान्यतया भन्दा बढी हरियो पातदार तरकारीहरू खानु गरी वारफेरिनको प्रभाव कम गर्न र मुटु जस्ता प्रतिकूल घटनाहरूको जोखिम बढाउन सक्छ। आक्रमण र स्ट्रोक।
रक्सी धेरै हानिकारक हुन सक्छ धेरै औषधीको साथ। औषधीको साथ रक्सी मिक्स गर्दै मतली, बान्ता, टाउको दुख्ने, बेहोशी, वा समन्वय गुम्ने जस्ता तीव्र साइड इफेक्ट हुन सक्छ। रक्सी पनि औषधीहरूलाई कम प्रभावकार वा सम्भावित विषाक्त बनाउन मानव शरीरको लागि जानिन्छ।
बेंजोडियाजेपाइनजस्ता एन्टी-फिक्सी ड्रग्ससँग रक्सी पिउँदा बढि निन्द्रा वा चक्कर आउँछ। रक्सी र ओपिओइड पेन्किलरहरूको संयोजनको समान प्रभाव पर्दछ र यसले घातक ओभरडोज लिन सक्छ। समग्रमा, केहि औषधिहरू सहित रक्सीको प्रयोगबाट जोगिनु उत्तम हो।
मूत्र पथ संक्रमण को उपचार को प्राकृतिक तरीका
यी खाद्य पदार्थहरू सयौं सम्भावित फूड-ड्रग अन्तर्क्रियाको सयौं हुन्। तपाईको फार्मासिष्टलाई खानाको बारेमा सोध्नुहोस् तपाईले अर्को पटक आफ्नो प्रिस्क्रिप्शन उठाउनु पर्दैन।
Back स्वस्थ शैक्षिक वर्षको लागि स्कूलमा पछाडि स्कूल सल्लाह
मैले कति vit d3 लिनु पर्छ?
एक फार्मेसी बाट अर्को फार्मेसी बाट नुस्खा सार्दै
toenail कवक को लागी लिस्टेरिन मा खुट्टा भिजाउने
कसरी छिटो न nail कवक बाट छुटकारा पाउन
vitdर vit d3 मा के फरक छ?
के mirena iud वजन बढाउँछ